Hevitra tany am-boalohany ho an'ny marika Krismasy | Famoronana an-tserasera
Judit Murcia | | Inspiration, maro
Izy ireo dia daty izay tena ilaina ny antsipiriany, ary faly isika rehetra na mandray sy manome fanomezana ho an'ny olon-tiantsika. Misy sary Krismasy tena mahazatra, ary rehefa miditra ao amin'ny efitrano fisakafoanana ianao dia mahita azy feno fanomezana. Manantena an'ity fotoana ity mandritra ny taona ny ankizy. HO AN'NY manavaka izay manana ny fanomezana, na ho an'ny tsotra fotsiny atolory azy amin'ny fomba tsara lavitra kokoa dia mamporisika anao izahay hamaky hatrany.
Zava-dehibe ny fandraisana an-tanana ireo singa rehetra. Manolotra ny sasany izahay hevitra manintona ampanjifaina ny etikety. Misy karazany isan-karazany, ary manome toky anao izahay fa hanome anao a fikitika manokana.
1 Famaritana manokana miaraka amina taratasy miraikitra
2 Labels misy sary
3 Marika misy baoritra misy vakana
4 Marika misy baoritra vita amin'ny baoritra
5 Bola mangarahara
6 Ireo anarana voasoratra miaraka amin'ny teknikan'ny Letters
7 Sintomy ny marika krismasy
8 Tombo-kase misy litera
9 Kitapo hazo
Famaritana manokana miaraka amina taratasy miraikitra
Alohan'ny hanombohanao hanao marika, tsy maintsy mieritreritra an'iza ianao? ary ampifanaraho amin'ny toe-javatra tsirairay ny volanao. Ohatra, raha mila mameno ny efitrano fisakafoanana amin'ny fanomezana ho an'ny ankizy samihafa ianao dia afaka mampiasa loko hamantarana ny fanomezana tsirairay. Hahazo koa isika a vokany hita maso manja tokoa. Alao an-tsaina ny efitrano fisakafoana feno fanomezana maro loko: manga, mavokely, maitso, mena, voasary. Ny loko tsirairay dia mety an'ny olona hafa. Mba hahatratrarana izany vokatra izany dia afaka mametaka isika naoty matevina miloko. Mora izy ireo ary mora lakaoly.
Azonao atao koa ny manararaotra ny maha-izy azy ireo manokana hampifanaraka azy ireo amin'ny olona tsirairay omenao azy. Manana safidy maro ianao, ary izahay nifidy izahay ho anao hanome aingam-panahy na hamerina ny sasany amin'ireo hevitra asehonay anao.
Labels misy sary
Ny safidy tsara hafa, izay tsy raisintsika hatrany dia ny mamorona marika mampiasa sary. Miankina amin'ny lohahevitry ny fanoratana ny anaran'ny mpandray antsika foana izahay, fa araka ny filazan'izy ireo "Ny sary mitentina teny arivo". Ho fanampin'izay, izy dia marika izay azo tazonina ho fanomezana hafa. Azonao atao ny mametaka ilay sary, na mamehy tadin-tseroka amin'ilay fanomezana ary ahantona amin'ny fehin-akanjo.
Mety hahafinaritra izany mikaroha sary taloha, fahafinaretana na mampatsiahy antsika a fotoana tsara eo akaikiny.
Marika misy baoritra misy vakana
Na dia a baoritra marika afaka mandaitra, afaka manome azy io mangatsiaka be isika raha tsy mampiasa hafa vakana mamorona indray endri-tsoratra Krismasy.
Raha mijery ny sary ianao dia misy safidy sy fomba maro hamoronana an'io vokatra io. Ohatra, a Snowman azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fametahana bokotra fotsy telo. Raha jerentsika ny lavaka ao amin'ilay bokotra, ny iray ambany, izay lehibe indrindra, dia manana lavaka efatra ary ny ambiny roa fotsiny. Mampahatsiahy antsika ireo eo afovoany bokotra t-shirt, sy ireo etsy ambony ny maso. Amin'ny marika dia manome ny fikitika farany isika. Tadidio fa zava-dehibe izany voalohany sary ireo singa ary taty aoriana apetaho ny bokotra. Fomba iray hafa mora ahazoana a Snowman Avy amin'ny landihazo baolina.
Marika misy baoritra vita amin'ny baoritra
Mandroso amin'ny fitaovana matevina kokoa, afaka misafidy ny paperboard. Hahazo bebe kokoa isika hentitra y fanoherana. Ny dingana voalohany dia ny manapaka ny baoritra amin'ny endrika tadiavintsika indrindra. Ny be mpampiasa indrindra dia endrika mahitsizoro. Vantany vao voakapa, hampiasa lamba misy modely Krismasy hanome azy ireo fifandraisana manokana. Afaka mahita azy ireo isika na aiza na aiza fivarotana zaitra.
Para hametahana ny lamba amin'ny baoritra, ny safidy tsara indrindra dia ny fampiasana Lakaoly fotsy o lakaoly fifandraisana. Izahay dia mamela anao hanana hevitra vitsivitsy hanentanana anao.
Ireo dia efa lamaody efa ela Baolina Krismasy totalmente mangarahara. Raha tokony hanantona azy ireo amin'ny hazo na amin'ny fidirana amin'ny vavahady isika dia afaka mampiasa azy io Label ny fanomezana antsika. afaka fenoy anaty amin'ny taratasy Soratra miaraka amin'ny Nombre an'ny olona
Ireo anarana voasoratra miaraka amin'ny teknikan'ny Letters
Ny teknikan'ny soratra Izy io dia misy mihoatra ny calligraphy, mifangaro eo amin'ny fanoratana sy ny fanaovana sary, ny firavaka na ny famoronana endrika miaraka amin'ilay litera. Noho izany, azo lazaina fa io no zavakanto manao sary amin'ny taratasy.
Se ovao ireo litera ary nohaingoina tsara izy ireo mba hanatsarana azy io. Afaka atao amin'ny fitaovam-panoratana izany. Ohatra, miaraka amin'ny borosy, marika (samy hafa ny hateviny), penina, sns. Mamela rohy mankany a ianao rohy tena mahaliana izay mampianatra antsika hanao soratra avy amin'ny fototra.
Sintomy ny marika krismasy
Tsy manam-potoana Tsy voatery hidika izany fa mila manaiky ho resy amin'ny famelabelarana tsara. Ny vahaolana atolotray anao dia ny misintona marika krismasy hany ka tsy maintsy manonta azy ireo fotsiny ianao. Ny ankamaroan'izy ireo dia manana toerana hanoratana ny anarana. Asehonay anao ny sasany rohy izay to download Maimaimpoana tanteraka ireo labozia izay hanome loko ny fanomezanao.
Tombo-kase misy litera
Safidy iray hafa izay hamela antsika mitsitsia fotoana betsaka dia ny fampiasana fitomboka taratasy. Afaka mividy a maika Miaraka amin'izy rehetra ABC ary mandehana ranomainty ary asio tombo-kase ireo litera mandra-pahatongan'ilay anarana tadiavina.
Ity safidy ity koa azo atoro ho an'ireo izay tsy manana sora-tanana tsara izy ireo ary tsy te hiala amin'ny fanaovana marika mpanao asa tanana izy ireo. Aza alaim-panahy hanao pirinty pejy misy anarana voatonta eo.
Ity hevitra ity dia tena natoraly ary manome sentona tena mahafinaritra amin'ny fanomezana azontsika. Ny hevitra dia manorata amin'ny tapa-damba hazo ny anaran'ny olona nanondroana ilay fanomezana. Mba handravahana ny clamp dia afaka mampiasa loharanom-pahalalana marobe isika.
Podemos trondromisy zavatra, tadidio fa raha izany Plano ho mora kokoa ny hihazona tsara. Manondro tarehin-tsoratra Krismasy na fatorana isika. Avelanay ianao a sary napetraka mba ho azonao bebe kokoa ny foto-kevitra izay resahina eo.
Raha te hanararaotra mandoko fantsika taloha izay anananao ao an-trano dia fomba tsotra mandoko ny kalipera samy hafa loko. ny tsara ny vokatra ary tsy mandoto ny trano ianao. Raha mampiasa spray ianao dia mila mitandrina mba tsy handoto na inona na inona, satria miparitaka hatraiza hatraiza ny loko, ankoatry ny fofona mavesatra avelany.
Ary raha tsy manana fotoana na fahaizana firy isika dia afaka manao izany mividy akanjo akanjo miaraka amina motera Krismasy ary mila manoratra fotsiny ny anarana amin'ny marika isika. Amin'ity rohy ho hitanao ireo fivarotana an-tserasera mividy paosy akanjo Krismasy amin'ny vidiny mirary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Hevitra tany am-boalohany momba ny fanamarihana fanomezana Krismasy